Malunga Nathi - Amethystum Storage Technology Co., Ltd.
Yasekwa ngo-2010, i-Amethystum Storage yeyona ndawo iphambili yogcino lweshishini lobugcisa obuphezulu eTshayina. Yayidweliswe kwi-SSE STAR MARKET ngoFebruwari 26, 2020 phantsi kwekhowudi yesitokhwe: 688086. Ijolise kwimakethi enkulu yedatha, inkampani ikhuthaza ulawulo lokugcinwa kwedatha olukrelekrele olushushu olushushu, idala iinzuzo zokukhuphisana kwikhonkco leshishini elipheleleyo ecaleni kwendlela yophuhliso ye-optical. yokugcina "media-device-software-solution" kwaye ibe sisisombululo esikhulu sokugcinwa kwedatha kunye nomboneleli wemveliso.
Ngomhla we-18 ka-Agasti, ngo-2020, i-Shenzhen encedisayo ye-Amethystum Storage, ishishini elikhokelayo kumzi-mveliso waseTshayina wogcino lwamehlo, osekwe ngokusesikweni kwiSithili soShishino esisembindini saseShenzhen. I-Shenzhen Amethystum igxile kuphando olutsha kunye nophuhliso lwemveliso yogcino lwabathengi kunye nezisombululo. Ngokufika kwexesha le-5G, idatha iba yimpahla engabonakaliyo yabantu, imfuno yabathengi yokugcina idatha yomntu iyanda imihla ngemihla.
Ukongeza kwiinketho zokugcina ezifana neediski ezinzima zemveli kunye neediski zefu zoluntu, abathengi abaninzi bayazi ngokubaluleka kokhuseleko lokugcinwa kwedatha. Isixhobo sokugcina ilifu labucala okanye losapho siya kuba sisixhobo esifanelekileyo sokugcina nokulawula idatha yobuqu ngokukhuselekileyo nangempumelelo. NgoFebruwari ka-2021, imveliso yobuqu yokugcina i-Photoegg yakhululwa ngokusemthethweni. Ibambe ingqalelo yabo bobabini abakhuphisanayo kunye nabathengi kwimarike.
I-Photoegg idibanisa ukugcinwa kwe-optical kunye nokugcinwa kwe-hard disk ehlakaniphile, ukudibanisa ukufaneleka konxibelelwano olufihliweyo, ulawulo oluhlakaniphile, ukugcinwa kwexesha elide, ukwandiswa okungenamkhawulo, ukufikelela kude, okukhuselekileyo nokuthembekileyo, okuyiziko lakho lokugcina idatha yasekhaya.
Ngophuhliso lweminyaka elishumi, i-Amethystum iya kuqhubeka nokupolisha iimveliso zayo kunye neqela ngomoya wokuqamba izinto ezintsha kunye noshishino, kwaye izimisele ukugcina ukhuseleko lolwazi lomntu kunye nokugcinwa kwedatha. Ukuma kwindawo entsha yembali, iya kuphinda ihambe kwakhona kwaye iqhubeke nokubhala isahluko esimangalisayo soshishino lokugcina ngexesha ledatha enkulu.